आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१० जेठ २०७७ शनिबार, २३ मई २०२०) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१० जेठ २०७७ शनिबार, २३ मई २०२०)
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार ००:५७
श्रीशाके १९४२ ग्रीष्म ऋतु प्रमादीनामक संवत्सर नेपाल सं. ११४० वि.सं. २०७७ ज्येष्ठ १० गते शनिबार तद्अनुसार सन् २०२० मई २३ तारिख ज्येष्ठ शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथि स्वाती रोहिणी नक्षत्र अतिगण्ड योग ४ः४२ पर सुकर्म योग किंस्तुघन करण आनन्दादियोगमा श्रीवत्स योग चन्द्रमा वृष राशिमा भ्रमणशील रहला । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः१३ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः४९ मा हुनेछ । दशहरास्नानारम्भ, गोसाईंकुण्डस्नानारम्भ ।
मेष – दिन रचनात्मक तथा शारीरिक उन्नतिदायक कार्यमा सफलता दिने खालको रहनेछ । अन्नधन बढ्नेछ । मान पुरस्कार प्राप्तिको अवसर छ । खेलकुद र भ्रमणमा रुचि होला । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । आय वृद्धि हुनेछ । हांसविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । भागदौड भैरहनेछ । लगानी उठ्ला ।
बृष – दिन शुभ र भाग्यवर्द्धक रहला । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । आयस्रोत बढ्ला । मिठो भोजन जुर्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । साझेदारीसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । सुख सम्पति वृद्धि होला । रसरागमा आकर्षित हुनु हुनेछ । मान पुरस्कारको प्राप्ति हुनेछ । भोज भतेरमा भाग लिनु हुनेछ ।
कर्कट – भोगविलासमा रुचि बढ्ला । भागदौड भइरहनेछ । समस्याको समाधान प्राप्त होला । सकभर विवादमा पर्नुबाट जोगिनु होला । आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु श्रेयष्कर होला । जोखिम मोल्ने समय होइन ।
सिंह – ऋण, रोग र शत्रुप्रति भारी पर्नुहुनेछ । अस्तव्यस्ततामा कमी हुनेछ । काममा विजय प्राप्त होला । देखिएको समस्या समाधान हुनेछ ।
वृश्चिक – समय अनुकूल तथा फलदायक रहला । प्रेममा सफलता मिल्नेछ । इष्टमित्र सुख सन्तति बढ्नेछ । विवादमा विपक्षी विजयी हुन सक्ने हुँदा त्यसमा नपर्नु नै हितकर होला । आरोग्यता बढ्ला । जीवनसाथीको सहयोग मिल्नेछ । आफन्तको सहयोग पनि मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । लगानी वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन ग्रहण गर्न पाउनुहुनेछ । उन्नति–पदोन्नति होला । भोगविलासमा आकर्षण बढ्नेछ ।
धनु – धनको आवागमन भैरहनेछ । भागदौड वृद्धि हुनेछ । रोकिएको काम बन्नुको साथै लगानी उठाउन चाहेमा सफल रहनुहुनेछ । दैनिक काममा सफलता मिल्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग–समर्थन मिल्नेछ । सुख समृद्धि बढ्नेछ । विवादमा नपर्नु बेस होला । मिहेनतयुक्त काममा रूचि वृद्धि होला । अरुको भर नपर्नु नै हितकर रहला ।
मीन – आरोग्यता बढ्ला । सुख शान्ति बढ्नेछ । मनोकुलको काम बनेर मन प्रशन्न रहनेछ । शुभ काममा भाग लिनुहुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । धन यश मान पद प्रतिष्ठा बढ्ला । शुभ काम बन्नेछ । गौरव बढ्ला । सुख शान्तिमा बढोत्तरी होला । रसरागमा रुचि बढ्नेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । सुखको वस्तुको लागि धन खर्च गर्नुहुनेछ । आँट पराक्रम बढ्नेछ । ऐश्वर्य वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियान सञ्चालन गरेको छ । कार्यालयले शुरु गरेको अभियानको दोस्रो सातासम्म विभिन्न स्थानबाट
भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बुधबारसम्म एक करोड १० लाख ४६ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । २४ घण्टाको अवधिमा भारतमा
चर्चित मास्टर सेफ सन्तोष साह भन्नुहुन्छ, ‘नेपाली खानालाई विश्वभर पस्किँदैछु’
सिबी अधिकारी, काठमाडौँं नेपाली भएर जन्मिएपछि संसारलाई नेपालको मौलिकता र पहिचान चिनाउनैपर्छ । मेहनत र सङ्घर्षले सफलताको शिखरमा पुऱ्याउने थोरै
भेनेजुएलाले युरोपेली युनियनका राजदूतलाई राजधानी काराकास ७२ घण्टाभित्र छाड्न आदेश दिएको छ । युरोपेली युनियनले भेनेजुएलाविरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गरेलगत्तै युनियनका